Jordi Giménez's chimiro muActualidad iPhone | IPhone nhau
Ndine shungu nezve zvese zvine chekuita netekinoroji uye ese marudzi emitambo. Ndakatanga neizvi kubva kuApple makore mazhinji apfuura nePod Classic - chero ani zvake asina kana mumwe weavo vaisimudza ruoko - kumberi anga achitobata nezvose zvigadzirwa zvehunyanzvi zvaaigona. Chiitiko changu neApple chakazara asi iwe unogara wakagadzirira kudzidza zvinhu zvitsva. Munyika ino, tekinoroji inofambira mberi chaizvo nekukurumidza uye neApple hazvisi izvo. Kubva 2009, pakasvika 120GB iPod Classic mumaoko angu, kufarira kwangu kuApple kwakamutswa uye inotevera kuuya mumaoko angu yaive iyo iPhone 4, iyo iPhone yakanga isisina kusungirwa pachibvumirano neMovistar uye kufambidzana iyo ingangoita yega gore ini ndinoenda yemhando nyowani. Chiitiko apa chiri zvese uye mumakore anodarika gumi nemaviri andange ndiine zvigadzirwa zveApple ndinogona kutaura kuti ruzivo rwangu rwunowanikwa pahwaro hwemaawa nemaawa. Munguva yangu yekusununguka ndinodimbura, asi handikwanise kusvika kure kure neangu iPhone neMac.Muchandiwana paTwitter se @jordi_sdmac
Jordi Giménez akanyora 1987 zvinyorwa kubva Zvita 2016
Ndira 18 Maitiro ekuisa ringtone pa iPhone
Ndira 17 Unogona kufungidzira HomePod ine bhatiri rekunze? Mark Gurman anoti Apple yakashanda pazviri
Ndira 14 Maitiro ekugovana WiFi kubva ku iPhone
Ndira 13 Face ID pasi pechidzitiro cheiyo iPhone 15
Ndira 03 Mamwe ma iPhone 14 modhi achabvisa notch uye nhau paMacs yegore rino
Zvita 29 Maitiro ekuisa vhidhiyo mukukurumidza kufamba pa iPhone
Zvita 27 Iyo itsva iPhone 15 inogona kubvisa iyo chaiyo SIM
Zvita 24 Yakasimbiswa. iOS 15.2 haivharidzi Face ID kana uchichinja skrini uye kuti ungaona sei kana chero chikamu che iPhone chakashandurwa.
Zvita 24 Iyo iPhone 14 Pro uye Pro Max haizowedze notch
Zvita 22 HomePod minis inoramba ichikura mukutengesa
Zvita 21 iOS 15.2 inobvumidza iwe kudzoreredza yakakiiwa iPhone pasina kudiwa kwekombuta
Zvita 20 Maitiro ekuisa password kune maapplication
Zvita 17 Pixelmator Mufananidzo wave kuwanikwa kune iPhone
Zvita 16 Universal Kudzora mashandiro ePad uye Mac akanonoka
Zvita 14 Wakamirira kusvika kweiyo foldable iPhone? Zvakanaka, kune angangoita makore maviri kuti uzvione zvinoenderana nerunyerekupe rwazvino
Zvita 13 Mushure mekusvika kweIOS 15.2 RC 2 ye iPhone 13, iyo yekupedzisira vhezheni inotarisirwa.
Zvita 10 Apple's bloated mabhatiri anounza imwe mhosva kune kambani
Zvita 10 Firmware update yakaburitswa AirPods 2 uye 3, AirPods Pro, AirPods Max, uye MagSafe charger.
Zvita 09 WhatsApp inotokubvumidza kuti utumire uye ugamuchire mari muchimiro chekrisptocurrencies muUS
Zvita 09 Zvekare 2 mwedzi yemahara yeApple Music yekutenda kuna Shazam